Bibelkring: “Boka reVadzidzi veBhaibheri”
MAKORE ekuma1930 ava kuda kunopera, kuLake Toba iri muNorth Sumatra kwakatanga chimwe chitendero chainzi Bibelkring (zita rechiDutch rinoreva “boka revadzidzi veBhaibheri”). Chitendero ichi chakatanga pashure pekunge vamwe vadzidzisi vechikoro vapiwa mabhuku nemumwe piyona ainge ashanya munharaunda yeLake Toba muna 1936, ndokuparidzira ikoko. Piyona wacho anofanira kunge aiva Eric Ewins. Zvavakaverenga mumabhuku aya zvakaita kuti vasiye chechi yavo yeBatak Protestant uye vakatanga mapoka ekudzidza Bhaibheri kudzimba dzavo. Mapoka aya akaramba achikura zvekuti akapedzisira ava nevanhu vanosvika mazana. *
Dame Simbolon uyo aimbova muBibelkring iye zvino ava hanzvadzi yedu yechiKristu
Pavaiverenga mabhuku akasiyiwa napiyona uyu, vanhu veBibelkring vakaziva chimwe chokwadi cheBhaibheri. “Vakaramba kusaruta mureza uye vakarega kuchengeta Krisimasi nemazuva ekuberekwa. Vamwe vacho vaitoparidza paimba neimba,” akadaro Dame Simbolon, aimbova muchitendero chacho uyo akazogamuchira chokwadi muna 1972. Asi nemhaka yekuti vakanga vasina rutsigiro rwesangano raMwari, vanhu vacho vakatanga kuva nedzimwe dzidziso dzisiri mumagwaro. “Vakadzi vakanga vasingabvumirwi kupoda, kupfeka mhete, kupfeka hembe dzemazuva iwayo, kana shangu chaidzo,” akadaro Limeria Nadapdap, aimbova muchitendero ichocho asi iye zvino ava hanzvadzi yedu yechiKristu. “Vanhu vacho vakanga vasingabvumirwiwo kuva nezvitupa, uye izvi zvakaita kuti hurumende igumbuke.”
Chitendero cheBibelkring chakazopedzisira chava kuita mapoka mapoka uye nekufamba kwenguva chakazoparara. Mapiyona paakazoenda munharaunda yeLake Toba zvakare, vazhinji vaimbopinda chitendero ichi vakagamuchira chokwadi.
^ ndima 1 Vamwe vanofungidzira kuti pane imwe nguva vanhu vaipinda chitendero cheBibelkring vakatombosvika zviuru.